Qaban-qaabada Caleemo-saarka Ugaaska Beesha Ciisaha ee maalinta Isniinta oo ka socota Saylac | Somaliland.Org
February 26, 2010	Hargeysa (Somaliland.Org)- Qaban-qaabada Munaasibadda Caleemo-saarka Ugaaska 19aad ee Beesha Ciisaha, ayaa ka socota magaalada Saylac ee Xarunta gobolka Selal, kaas oo la filayo in ay ka qayb galaan madax badan oo ka kala socota Dawladaha Somaliland, Jabuuti iyo Itoobiya.
Munaasibadda Caleemo-saarka Ugaaska 19aad ee Beesha Ciisaha oo la filayo in maalinta Isniinta ah lagu qabto Magaalada Saylac, ayay qaban-qaabadeedii ka socotaa magaaladaas. Waxaana goobta loo cayimay in lagu qabto Munaasibadda Caleemo-saarka laga dhisay Taambuug amaba Taandho ballaadhan oo lagu rakibay qaboojiyayaal iyo agab kale oo kuwa Laydhka ah, taas oo loogu talo-galay in ay ka dhacdo Xafladda Caleemo-saarku, waxa taas barbar socda diyaarinta goobaha kale ee ay degi doonaan martida kala duwan ee ka qayb-galaya Caleemo-saarkan.
Siday sheegayaan Wararka ka imanaya magaalada Saylac, ilaa 1,500 oo qof ayaa ka qayb-galaya caleemo-saarka, kuwaas oo isugu jira Madax, masuuliyiin kale, madax-dhaqameed, Culima’udiin, Saxaafadda iyo marti-sharaf kale oo tiro badan.
Caleemo-saarkan oo ah tii ugu horraysay ee nooceeda ah, ayaa la filayaa inay maalinta Axadda ku qabsoonto magaalada Saylac.
Previous PostNin Ruush ah oo lagu eedeeyay inuu qalanayay Gabadh yar oo ka hadlay eedaynta loo jeediyayNext PostRa’iisal-Wasaarihii hore ee Soomaaliya oo dafiray waxay Somaliland qabsatay	Blog